9-Me-BC Experience: 7 Ny momba anao mila fantatrao
Inona no atao hoe 9-ME-BC?
9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) fantatra koa amin'ny hoe 9-MBC dia fitambarana nootropic avy amin'ny vondrona β-carboline. Ny β-Carbolines dia avy amin'ny fianakaviana karbônina heterogenika. Midika izany fa izy ireo dia novokarina niaraka tamin'ny endogenous tao amin'ny vatan'olombelona ary koa exogenous amin'ny voankazo, hena nandrahoina, setroka sigara ary kafe.
Ny β-Carbolines (BCs) dia fantatra ho neurotoxic, na izany aza, vao tsy ela akory izay no nahitana fa mahasoa ny 9-Me-Bc. 9-Me-BC dia neuroprotector dopaminergika izay manatsara ny fiasan'ny kognita.
Vovoka 9-Me-BC ary koa kapsily 9-Me-BC fanampin endrika iray nootropic tena tsara. Koa satria tsy toy ny nootropics hafa izay manjavona tombony aorian'ny ora vitsivitsy, 9-Me-BC dia manome vokatra maharitra sy maharitra.
Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovoka 9-me-bc
Vovoka 9-ME-BC- Ahoana ny fomba fiasany?
9-Me-BC dia nootropic boribory tena tsara izay mampiseho fomba fiasa maromaro. Ny mekanisma fiasa 9-Me-BC marobe dia ahafahany mandaitra amin'ny asany.
Ireto ambany ireto ny mekanisma fanaovana hetsika 9-Me-BC;
Mampisondrotra ny haavon'ny dopamine ao amin'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fahasimban'ny dopamine, tsy toy ny stimulants hafa toy ny kafeinina izay mampihena ny dopamine noho ny famotsorana sy ny fampiasana be loatra.
9-Me-BC dia mandrisika ny fiasan'ny dopamine, manavaka ary miaro ny neurônina, dendrites ary synapses ao amin'ny ati-doha. Izany no antony ahafahany manatsara ny fianarana, fahatsiarovana ary ny fiasan'ny kognita
Izy io dia misy akony amin'ny tyrosine hydroxylase (TH) sy ireo singa mpandika azy rehefa mifanerasera amin'ny kinases tyrosine. Ireo kinases tyrosine dia mitana anjara toerana amin'ny famadihana ny L-tyrosine ho L-Dopa tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny dopamine.
Ny 9-Me-BC dia manakana ny monoamine oxidase A sy B (MAOA sy MAOB) ka manakana ny famokarana vovoka neurotoxic toy ny DOPAC amin'ny metabolisation dopamine. Ireo zavatra ireo dia miteraka fahafatesan'ny neurônôma dopaminergika.
9-Me-BC dia manatsara ny rojo mitochondrial respiratory. Izy io dia manatanteraka izany amin'ny alàlan'ny fampitomboana na fiarovana ny dehydrogenase NADH, izay ampiasaina amin'ny dingan'ny famindrana elektronika ho an'ny famokarana angovo.
9-Me-BC dia afaka mampitombo ihany koa ny anton-neurotrofika toy ny fisondrotan'ny Nerve factor (NGF), SHH (Sonic Hedgehog Signaling Molecule), ny neurotrophic factor (BDNF) avy amin'ny ati-doha izay manatsara ny fiasan'ny kognita, ny fifantohana ary koa ny antony manosika.
Manentana ny asan'ny neurônaly izy io ary mampiroborobo ny fitomboan'ny neurons vaovao. Manatsara ny fitadidy sy ny fianarana ary ny fiasan'ny kognita ankapobeny.
Toetoetra fanoherana ny inflammatoire. 9-me-BC dia mitranga amin'ny ady amin'ny fivontosana maharitra ao amin'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny fampihenana ny cytokines mamaivay, izay fantatra fa miteraka fiangonan'ny microglial izay manelingelina ny fiasan'ny kognita.
Tombontsoa 9-ME-BC - Ahoana ny vovoka 9-ME-BC (Nootropic) afaka manampy anao?
9-Me-BC fanampin manana tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany. Ny tombony 9-Me-BC isan-karazany dia vokatry ny fomba fiasa marobe asehony.
Ireto ambany ireto ny tombony 9-Me-BC;
i. Afaka manatsara ny fianarana, ny fitadidy ary ny fahalalana
9-Me-BC dia mandrisika ny fiasan'ny neurons ary koa mampitombo ny fitomboan'ny sela neuron vaovao. Tena fanalahidy io amin'ny fampivoarana ny fianarana, fahatsiarovana ary ny fiasan'ny kognita ankapobeny.
9-Me-BC koa hampisondrotra ATP famokarana angovo amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny rojo mitochondrial respiratory. Noho izany dia mitombo angovo izay mampitombo ny antony manosika sy mailo.
Tamin'ny fandinihana ny voalavo, ny fanampin-tsakafo 9-Me-BC nomena 10 andro dia hita hanatsarana ny fahalalana. Ny fanadihadiana dia nitatitra fa noho ny fitomboan'ny haavon'ny dopamine ary koa ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny synapses sy dendrites.
II. Manampy amin'ny ady amin'ny fivontosana
Ny fivontosana dia rafitra voajanahary anaovan'ny vatana ny aretina sy ny ratra. Na izany aza, ny fivontosana maharitra dia mety hanimba ny vatana ary mifandray amin'ny aretina maro toy ny diabeta sy homamiadana.
Nanjary ilaina ny mamehy io fivontosana io alohan'ny hahatonga azy io tsy ho simba amin'ny vatanao. Soa ihany, ny vovoka 9-Me-BC dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fivontosana maharitra. Miady amin'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny cytokines mampihetsi-po.
III. Afaka manatsara ny libido
9-Me-BC nootropic compound dia tena dopaminergika. Ny fitambaran'ny dopaminergika dia fantatra fa mampitombo ny haavon'ny dopamine ao amin'ny ati-doha. Io indray dia mampitombo ny hetsika dopamine izay mifandray akaiky amin'ny fitomboan'ny libido.
IV. Mety hanatsara ny zava-bitan'ny atleta
Ny fahaizan'ny 9-Me-BC hampitombo ny famokarana angovo ary koa ny toe-po ary ny antony manosika dia mahatonga azy io ho mpirotsaka hofidiana hanatsara ny fahombiazan'ny atleta.
9-Me-BC traikefa: Ahoana ny fampiasana 9-MBC?
Ny doka 9-Me-BC izay atolotra dia maka kapsily 9-Me-BC isan'andro. Ny kapsily 9-Me-BC dia mitovy amin'ny 15 mg ny vovoka 9-Me-BC.
Manoro hevitra anao ny handray ny kapsily 9-Me-BC amin'ny maraina satria fantatra fa hampitombo ny fahamailoana, ny fahatsapana ary ny antony manosika, izay tena takinao mandritra ny hetsika mandritra ny andro.
Milamina sy ara-dalàna ve ny fampiasana 9-MBC? 9-me-bc risika?
9-MBC dia heverina ho azo antoka amin'ny ankapobeny sakafo fanampiny. Avy amin'ny fanadihadiana biby, nootropic 9-Me-BC notanterahina nandritra ny 10 andro dia hita fa azo antoka tanteraka.
Na izany aza, tsy misy angona azo ampiasaina momba ny fampiasana famenon-tsakafo 9-Me-BC mandritra ny fotoana maharitra ary koa fitsapana klinika faran'izay kely momba ity nootropic 9-Me-BC ity.
Tsara araka izany ny mitandrema rehefa mandray an'io nootropic io amin'ny alàlan'ny fiatoana eo anelanelany mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny 9-Me-BC mety hitranga.
Ny fanampiana 9-Me-BC dia ara-dalàna amin'ny firenena rehetra manerantany. Izy io dia voasokajy sy amidy ho famenon-tsakafo noho izany mifehy amin'ny fomba mitovy amin'ny sakafo avy amin'ny Food and Drug Administration.
Ara-dalàna ho an'ny rehetra ny mividy sy mampiasa ny famenon'ny 9-Me-BC. Na eo aza izany, heverina ho azo antoka ara-dalàna ny 9-Me-BC, nanoro hevitra ny olona iray izy mba hanantona ny mpitsabo azy alohan'ny hidirany ao.
Na dia heverina ho azo antoka aza ny fanampiana 9-Me-BC amin'ny ankapobeny dia misy ny vokatra roa mety hitranga amin'ny 9-Me-Bc izay mety hiainanao;
Fahatsapana sary – Tokony hialana amin'ny fampiasana ny tara-masoandro rehefa ampiasaina Famenon'ny 9-Me-BC satria io dia mety hiteraka fahasimban'ny ADN noho ny fiparitahan'ny taratra UV. Raha tsy maintsy eo ambanin'ny hazavan'ny masoandro ianao dia ilaina ny miaro ny masoandro mba hisorohana ireo voka-dratsy voalaza 9-Me-BC.
Mety hitranga koa ny neurotoxisialy dopamine; na izany aza, mitranga izany rehefa mihoatra ny doka 9-Me-BC voalaza ianao. Noho izany dia azo sorohina amin'ny alàlan'ny fandraisana ny doka 9-Me-BC voalaza.
Ny voka-dratsin'ny 9-Me-BC hafa notaterina avy amin'ireo mpampiasa nizara ny zavatra niainany 9-Me-BC dia misy ny maloiloy sy aretin'andoha. Na izany aza, ireo vokatra ratsy ireo dia tena tsy fahita firy ary mitranga izany rehefa mihinana tafahoatra ny famenon'ny 9-Me-BC.
Iza no afaka mahazo tombony amin'ny 9-me-bc (nootropic)?
Amin'ny ankapobeny ny tsirairay dia afaka mioty ny tombony azo avy amin'ny nootropic 9-Me-BC. Na izany aza, vondron'olona sasany no mahazo tombony bebe kokoa amin'ny 9-Me-BC noho ny hafa. Afaka mijinja be ny mpiasa, ny mpianatra ary ny atleta Tombony 9-Me-BC.
Koa satria ny 9-Me-BC dia tena boribory tsara sy tena dopaminergika, fanampin-tsakafo tena tsara ho an'ireo mpianatra te hampitombo ny fahamailoana, antony manosika hianatra raha mbola manatsara ny fianarany sy ny fitadidiany hitadidy bebe kokoa.
Ny fiasana dia mety manasasatra sy mitera-doza, saingy soa ihany fa ny 9-Me-BC dia manome ny antony manosika sy ny angovo izay manatsara ny fahaizanao miasa. Manentana ny neurônina izay mitazona anao hifantoka hatrany hatrany.
Ireo mpampiasa ny hevitry ny 9-Me-BC dia miabo be fa tsy misy na ny voka-dratsy atiny voalaza. Tsara izany fanampin ho an'ny rehetra.
Vovoka 9-ME-BC amidy - Aiza no hividianana 9-ME-BC?
9-Me-BC amidy mora azo amin'ny Internet. Na izany aza, ny fahadiovana avo lenta dia tokony hatoky anao hahazoanao ny valiny andrasana. Diniho ny fanadihadihana 9-Me-BC avy amin'ny mpampiasa mba hahitanao ny capsule 9-Me-BC tsara indrindra na ny vovoka.
Toy ny famenony hafa dia tsara ny mijery ny loza mety hitranga amin'ny 9-Me-BC izay mety hitranga ary mitandrina.
Mpampiasa marobe 9-Me-BC no mividy azy amin'ny fankatoavana mpamatsy nootropics izay manolotra amidy 9-Me-BC amina kalitao tena avo lenta.
Rehefa mieritreritra ny hividy 9-Me-BC ianao dia mividia amin'ireo orinasa manolotra 9-Me-BC amidy amina betsaka mba hankafizanao ny vidiny mihena.
Gille G., Gruss M., Schmitt A., Braun K., Enzenperger C., Fleck C. ary Appenroth D. (2011) 9-Methyl-b-carboline dia manatsara ny fianarana sy ny fitadidiana amin'ny voalavo. Neurodegen. Dis. 8, 195.
Gruss, M., Appenroth, D., Flubacher, A., Enzenperger, C., Bock, J., Fleck, C.,… Braun, K. (2012). Ny fampivoarana kognitika 9-Methyl-β-carboline dia mifandraika amin'ny haavon'ny dopamine hippocampal avo lenta ary ny fihanaky ny dendritika sy ny synaptika. Journal of Neurochemistry, 121 (6), 924–931.doi: 10.1111 / j.1471-4159.2012.07713. X.
Hamann, J., Wernicke, C., Lehmann, J., Reichmann, H., Rommelspacher, H., & Gille, G. (2008). 9-Methyl-β-carboline up-mandrindra ny fisehoan'ny neurones dopaminergic miavaka amin'ny kolontsaina mesencephalic voalohany. Neurochemistry International, 52 (4-5), 688-700.doi: 10.1016 / j.neuint.2007.08.018.
Polanski W., Enzenperger C., Reichmann H. ary Gille G. (2010) Ny toetra miavaka amin'ny 9-methyl-beta-carboline: fanentanana, fiarovana ary famerenana ny neurônôma dopaminergika miaraka amin'ny vokadratsy anti-inflammatoire. J. Neurochem. 113, 1659–1675.
Wernicke, C., Hellmann, J., Ziêba, B., Kuter, K., Ossowska, K., Frenzel, M.,… Rommelspacher, H. (2010). 9-Methyl-b-carboline dia misy fiantraikany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny maodelin'ny aretina Parkinson. Tatitra momba ny fanafody, 19.
RAVA 9-METHYL-9H-BETA-CARBOLINE POWDER (2521-07-5)
1.Inona no atao hoe 9-ME-BC?
Vovoka 2.9-ME-BC- Ahoana ny fomba fiasany?
Tombony 3.9-ME-BC - Ahoana no ahafahan'ny Powder 9-ME-BC (Nootropic) manampy anao?
4. traikefa 9-Me-BC: Ahoana ny fampiasana 9-MBC?
5. Milamina sy ara-dalàna ve ny fampiasana 9-MBC? 9-me-bc risika?
6. Iza no afaka mahazo tombony amin'ny 9-me-bc (nootropic)?
Vovoka 7.9-ME-BC amidy - Aiza no hividianana 9-ME-BC?